စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့ အလုပျတှကွေောငျ့ ကိုယျရောစိတျပါ ပငျပနျးနပွေီလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ယနခေ့တျေမှာ အဖကျဖကျက တိုးတကျမှုမြားပွားလာတာနဲ့အမြှ လုပျငနျးခှငျတှငျး ပွိုငျဆိုငျမှုမြားလညျး ပွငျးထနျလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျခှငျကရတဲ့ စိတျဖိစီးမှုဟာ လုပျငနျးခှငျဝနျထမျးတိုငျးလိုလိုမှာ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ရှိတတျကွပါတယျ။ ယာယီစိတျဖိစီးမှုတှကေ အခြိနျတိုအတှငျး သူ့အလိုလို ပြောကျကှယျသှားတတျတာမို့ စိုးရိမျစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မကွာခဏ စိတျဖိစီးမှုဖွဈနတောကို ကောငျးစှာမဖွရှေငျးနိုငျရငျတော့ နာတာရှညျစိတျဖိစီးမှုတှေ ဖွဈပျေါပွီး အဲဒီကတဈဆငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာမြားကိုသာမက ဆီးခြို၊ သှေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါ စသော ကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကိုပါ ပျေါပေါကျစပေါလိမျ့မယျ။
>> အလုပျကွောငျ့ စိတျဖိစီးခွငျး မဖွဈပျေါအောငျ ဘယျလိုစီမံမလဲ?
● ကိုယျ့ကို နစေ့ဉျ စိတျဖိစီးစသေောအရာမြားကို လြှော့ခပြါ။
နစေ့ဉျ လုပျငနျးခှငျဆောငျရှကျခကျြမြားကို လိုအပျလြှငျ ပွောငျးလဲပါ။ ဥပမာ - အရငျကထကျ ပိုမိုစညျးစနဈကအြောငျနခွေငျး၊ အခြိနျကို သခြောစီမံခနျ့ခှဲခွငျး စသော လုပျငနျးခှငျဆိုငျရာ ပွောငျးလဲခွငျးမြားကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
● အိပျရေးဝအောငျ အိပျပါ။ အာဟာရ လုံလောကျအောငျ စားသုံးပါ။
တဈနလြေှ့ငျ အိပျခြိနျ ၇-၉ နာရီရှိအောငျ အိပျပါ။ အစားအသောကျအနနေဲ့ဆိုရငျလညျး အာဟာရပွညျ့အောငျ အစုံစားပါ။ အခုလို စိတျဖိစီးမှုမြားနခြေိနျမှာတော့ ဗီတာမငျ ဘီနဲ့စီပါတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ပိုပွီးဂရုတစိုကျ စားပေးပါ။
● စိတျဖိစီးမှု လြော့နညျးအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။
စိတျဖိစီးမှု လြော့နညျးစအေောငျ ကူညီပေးသော activities မြားအနကျ မိမိအတှကျ အသငျ့တျောဆုံးဖွဈမယျ့ activity တဈခု သို့မဟုတျ နှဈခုကို ရှေးခယျြပွုလုပျပါ။ ဥပမာ - သီခငျြးနားထောငျခွငျး၊ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျခွငျး၊ တရားထိုငျခွငျး စသညျဖွငျ့ တဈဦးခငျြးစီရဲ့အကွိုကျပျေါ မူတညျပွီး ကွိုးစားကွညျ့နိုငျပါတယျ။
● သကွားပါဝငျမှုမြားသော အားဖွညျ့အခြိုရညျမြားကို တတျနိုငျသလောကျ ရှောငျကွဉျပါ။
လူအမြားစုက စိတျဖိစီးမှု မြားလာရငျ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှေ သောကျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုသောကျသုံးခွငျးက ကွာရှညျလာတာနဲ့အမြှ မိမိရဲ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုမြားလို့ တဈခုခု သောကျခငျြတယျဆိုရငျတောငျ ရကေိုပဲ တဈနေ့ ၂ လီတာပွညျ့အောငျ သောကျပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။
● အလုပျကပေးသော စိတျဖိစီးမှုမြားကို လြှော့ခဖြို့ နညျးလမျးကို ရှာဖှပေါ။
အလုပျတှငျ ပိုမိုပြျောရှငျအောငျ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
လုပျငနျးခှငျမှပေးသော စိတျဖိစီးမှုမြားကို ဖွဖြေောကျနိုငျခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာခွငျးနဲ့အတူ အောငျမွငျတိုးတကျသောဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ မိမိမှာ နှဈရှညျလမြား စိတျဖိစီးမှုကို ခံစားနရေတယျဆိုပါက စိတျပိုငျးဆိုငျရာဆရာဝနျထံ သှားရောကျဆှေးနှေးပွီး ကုသမှုခံယူသငျ့တယျ ဆိုတာကိုလညျး အကွံပေး တငျပွလိုကျပါတယျ။
ယနေ့ခေတ်မှာ အဖက်ဖက်က တိုးတက်မှုများပြားလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုများလည်း ပြင်းထန်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ခွင်ကရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဝန်ထမ်းတိုင်းလိုလိုမှာ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ယာယီစိတ်ဖိစီးမှုတွေက အချိန်တိုအတွင်း သူ့အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တာမို့ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မကြာခဏ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေတာကို ကောင်းစွာမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အဲဒီကတစ်ဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုသာမက ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါ စသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုပါ ပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်။
>> အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးခြင်း မဖြစ်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုစီမံမလဲ?
● ကိုယ့်ကို နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးစေသောအရာများကို လျှော့ချပါ။
နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို လိုအပ်လျှင် ပြောင်းလဲပါ။ ဥပမာ - အရင်ကထက် ပိုမိုစည်းစနစ်ကျအောင်နေခြင်း၊ အချိန်ကို သေချာစီမံခန့်ခွဲခြင်း စသော လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
● အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ။ အာဟာရ လုံလောက်အောင် စားသုံးပါ။
တစ်နေ့လျှင် အိပ်ချိန် ၇-၉ နာရီရှိအောင် အိပ်ပါ။ အစားအသောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း အာဟာရပြည့်အောင် အစုံစားပါ။ အခုလို စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန်မှာတော့ ဗီတာမင် ဘီနဲ့စီပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပိုပြီးဂရုတစိုက် စားပေးပါ။
● စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းအောင် လေ့ကျင့်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေအောင် ကူညီပေးသော activities များအနက် မိမိအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် activity တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာ - သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
● သကြားပါဝင်မှုများသော အားဖြည့်အချိုရည်များကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
လူအများစုက စိတ်ဖိစီးမှု များလာရင် အားဖြည့်အချိုရည်တွေ သောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုသောက်သုံးခြင်းက ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှ မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ တစ်ခုခု သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ရေကိုပဲ တစ်နေ့ ၂ လီတာပြည့်အောင် သောက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
● အလုပ်ကပေးသော စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချဖို့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။
အလုပ်တွင် ပိုမိုပျော်ရွှင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှပေးသော စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖြေဖျောက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်တိုးတက်သောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိမိမှာ နှစ်ရှည်လများ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားနေရတယ်ဆိုပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ဆွေးနွေးပြီး ကုသမှုခံယူသင့်တယ် ဆိုတာကိုလည်း အကြံပေး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၂၇.၁ဝ.၂ဝ၂ဝ | ကနျြးမာရေး ဆိုငျရာဗဟုသုတမြား
ဝမျးဗိုကျပွဿနာတှဟော ဆရာဝနျဆီ အမွနျဆုံးသှားပွရသော အဓိကအကွောငျးရငျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သငျ ဗိုကျနာတဲ့အခါ ဗိုကျထဲက အစိတျအပိုငျးတဈခုခုက နာနခွေငျးမဟုတျဘဲ အခွားအကွောငျးရငျးတှလေညျး ရှိနိုငျပါတယျ။
>> ဗိုကျနာရခွငျး အကွောငျးရငျးမြားကတော့ -